Akụkọ - Lyophilized okpueze ọhụrụ nucleic acid reagent nwere ike ibuga ya na ime ụlọ, ma nwee ike iguzogide 47 ℃ akwa okpomọkụ. Oyi ejighizi oke igwe!
Lyophilized ọhụrụ okpueze nucleic acid reagent nwere ike ebu na ụlọ okpomọkụ, na ike idi 47 ℃ elu okpomọkụ. Oyi ejighizi oke igwe!
Ọchịchọ zuru ụwa ọnụ maka nyocha nucleic acid nke ofesi na-agbawa
Dika onu ogugu ndi WHO si kwuo, rue elekere ano nke September 16, 2020, oge Beijing, onu ogugu nke COVID-19 gburugburu uwa kariri nde 29.44 ma ihe kariri 930,000 anwuola.
Na-eche ọrịa na-efe efe nke mba ofesi na-arịwanye elu, ọchịchọ maka ihe ndị na-achọpụta ihe na-akpata acid COVID-19 bụ nnukwu. Lọ ọrụ ndị na-ahụ maka nyocha nke China nwere ahụmịhe ahụike na ngwa ngwa, yana n'otu oge ahụ, ha nwekwara nnukwu uru na ọnụ ahịa, na-enye nnukwu ohere ahịa maka mba ụwa. Agbanyeghị, usoro izipu ngwa iwu na mba ofesi dị mgbagwoju anya ma na-eche ọtụtụ nsogbu ihu.
Nsogbu ogologo ogologo ogologo usoro nsogbu nsogbu njem na nsogbu njem nwere ike bụrụ nnukwu ihe mgbochi mbupụ mba ofesi
Site na mmelite nke iwu mbupụ mba maka ngwaahịa mgbochi ọrịa, yana mmelite nke mmụba nke ndị mmadụ na lọjistik na mba dị iche iche, oge njem nke ndị reagent agbatịwo ogologo oge na enweghị mgbagwoju anya, yana nsogbu ngwaahịa nke njem nke reagent aghọwo ndị a ma ama. Iji hụ na ọnọdụ okpomọkụ ahụ ruru ogo na ogo ngwaahịa a tozuru, igbe igbe nyocha nucleic acid nke erughị 50g na kilogram ole na ole akpụrụ akpụrụ nwere ike ịdịru naanị ụbọchị abụọ ma ọ bụ ụbọchị atọ.Nsogbu nke ihe eji eme otutu uzo na njem ndi ozo nwere ike ibu nnukwu nsogbu nye ndi mba ofesi.
Obere ọnọdụ okpomọkụ na-akpata oke njem njem dị oke elu. A ghaghị ịchekwa ndị na-eme nchọpụta acidic na-eme ka a ghara ịchekwa ma bufee ha oyi (-20 ± 5) Celsius C iji hụ na ihe ndị ha na-eme na biologically anaghị adị irè. N'ihe banyere omume ụlọ ọrụ, ezigbo ibu nke ihe nrụpụta nke ndị nrụpụta nyere bụ ihe na-erughị 10% nke igbe (ma ọ bụ karịa n'okpuru uru a), na ọtụtụ ibu ahụ sitere na akọrọ akọrọ, ngwugwu ice, na igbe ụfụfụ, na njem njem dị oke elu.
A na - agbatị ngwa ngwa ma na - ewepụ mmetụta mmetụta oyi. Na oge pụrụ iche, mkpokọta ụgbọ njem nke ngwa ngwa emeela ka ọ gbasaa oge. Iji hụ na ogo nke mmiri mmiri reagents, ndị na-ebupụ ahịa na-adịkarị mkpa ịkwadebe nhazi usoro oyi nke ọtụtụ oge ụgbọ njem ụlọ. Ọ bụrụ na enweghị ike ịkwado ọnọdụ njem njem, ogo ngwaahịa a na-enyefe ndị ahịa ga-abụ nnukwu ajụjụ akara.
Nhazi ngwaike na ezughi oke. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ụlọ ọrụ ahụike na-arụkarị ọrụ nyocha ihe omimi ma ha agaghị akwadebe ọtụtụ friji ma ọ bụ gbakwunye nnukwu ebe nchekwa oyi. N'oge ntiwapụ ahụ, enweghị ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe nke ndị ọrụ ebere nwere ike iru -20 Celsius C nchekwa conditio
Full-akụrụngwa ajuju reagents, mbupụ nucleic acid reagents ịghọta nkịtị okpomọkụ njem
Iji mebie site na nsogbu nke ihe nyocha ihe omimi nke dị mkpa ka echekwa ma bufee ya na -20 Celsius C, "Novel coronavirus 2019-nCoV RT-PCR kitic acid detection kit (lyophilized)" nke Shanghai Chuangkun Biotech Inc. mepụtara. zuru-akụrụngwa oyi kpọnwụrụ kpọrọ nkụ reagents nwere ike kwes kwụsie ike ka nagide oke okpomọkụ nke 47 Celsius ọ dịkarịa ala ụbọchị 60, ma enwere ike ịchekwa ya na ụlọ okpomọkụ ma bufee ya na ụlọ okpomọkụ. Nke a na-edozi isi ihe mgbu nke ọma na njem nke mmiri COVID-19 nucleic acid na-achọ nchebe zuru oke n'oge gara aga, ma belata nrụgide na mgbochi na njikwa ọrịa.
Uru nke ajuju nucleic acid mmeghachi omume
Shanghai Chuangkun Biotech Inc.'s ihe ngwongwo zuru oke nke COVID-19
nucleic acid nchọpụta reagent nwere uru ndị a na mgbakwunye
ka ya mejupụtara na ọrụ tụnyere mmiri mmiri reagents:
Nchekwa na njem n'ime ụlọ:ọ dịghị mkpa ka echekwa ya na obere okpomọkụ tupu imeghe ya, nke dị mma maka ụlọ ọrụ ahụike na ọkwa niile.
zuru ezu na otu nzọụkwụ:Ihe niile dị na lyophilized, ọ dịghị usoro mmeghachi omume PCR achọrọ, a pụkwara iji ya mgbe emezigharị, na-eme ka usoro ọrụ ahụ dị mfe.
Chọpụta 3 zaa ozugbo:Ebumnuche ahụ kpuchiri NoF coronavirus ORF1a / b gene na N gene. Iji belata ihe na-adịghị mma, ule IC nke mkpụrụ ndụ ihe nketa nke dị n'ime agbakwunyere na ngwaahịa a, nke nwere ike nyochaa usoro nnwale niile site na nlele, mmịpụta na mmụba, ma zere ihe ndị na-adịghị mma. Nnyocha na-efu.
Ka ọ dị ugbu a, ihe nyocha COVID-19 nke ngwakọta acid zuru oke enwetarala asambodo EU CE, wee banye nke ọma na "ndepụta ọcha" nke Chamberlọ Ọrụ Azụmaahịa nke China maka Mbubata na Mbupụ nke Ahụike Ahụike na Septemba 15, 2020, na ọ pụtara na a nabatara kit ahụ ka ọ bụrụ na a ga-ebupụ ya maka ire ere nke esenidụt iji nyere ụwa aka ịlụ ọgụ nke COVID-19.
E depụtara Shanghai Chuangkun Biotech Inc. ọhụrụ 'Medical Insurance Chamber of Commerce's List of Medical Material Manufacturers Enweta Asambodo Ọchịchị Ofesi ma ọ bụ Ndebanye aha' 'nke ụlọ ọrụ China na-ebubata na Mbupụ Ọgwụ na Ahụike. O nweta iru eru nke mbupụ ma nwee ike ibupụ iji kwado ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ.
Nje virus ahụ enweghị ókèala, na mgbochi na ịchịkwa ọrịa na-achọ mmeghachi omume nke mba ụwa. Ngwa nke zuru-akụrụngwa ifriizi-ihicha usoro na COVID-19 ndị na-achọpụta acid nucleic ga-aba uru na mgbochi na njikwa nke ụwa COVID-19 ntiwapụ ọrịa. Iji kwado mba ụwa ka ha jikọtara ọnụ na nsogbu ahụike ọha na eze n'okpuru nsogbu COVID-19, Shanghai Chuangkun Biotech Inc. na-enye "Novel coronavirus 2019-nCoV RT-PCR nucleic acid detection kit (lyophilized)" nke dị elu. eme ka agha zuru ụwa ọnụ megide ọrịa China na-efe efe!